HeartBeat Nepal अनमोल केसीको ‘क्याप्टेन’ र आशिरमान देशराजको ‘द ब्रेकअप’ प्रदर्शनमा, कस्तो छ ब्यापार ? - HeartBeatNepal
अनमोल केसीको ‘क्याप्टेन’ र आशिरमान देशराजको ‘द ब्रेकअप’ प्रदर्शनमा, कस्तो छ ब्यापार ?
काठमाडौं । हरेक शुक्रबार जस्तै आज पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दुईवटा चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन् । लोकप्रिय अभिनेता अनमोल केसीको ‘क्याप्टेन’ र अर्का अभिनेता आशिरमान देशराज जोशीको ‘द ब्रेकअप’ प्रदर्शजनमा आएको हो । शुक्रबारको पहिलो शोले दुवै चलचित्रले राम्रो दर्शक पाएको छ । क्याप्टेनमा लोकप्रिय अभिनेता अनमोल रहेका छन् भने ‘द ब्रेकअप’मा भने दर्शकले रुचाएका निर्देशक हेमराज बीसीको निर्देशन रहेको छ । जस कारण दुवै चलचित्रले दर्शक राम्रो पाउने आशा निर्माण टिमहरुले गरेका छन् । दुवै चलचित्रमा ठूला ब्यानरका मानिन्छन् ।
दुवै चलचित्र एक अर्काको प्रतिस्पर्धामा भन्दा पनि आफ्नो कथा र गुणस्तरीयतालाई ध्यानमा राखेर दर्शक पाउने आशामा रहेका छन् । चलचित्र क्याप्टेनका निर्माता तथा सदावहार अभिनेता भुवन केसीले चलचित्र ब्रेकअपलाई सफलताको शुभकामना दिए । ‘हामी एउटै मितिमा प्रदर्शनमा आएका छौँ यसको मतलब हामीले प्रतिस्पर्धा गरेका होइनौँ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको बलिउड चलचित्र नै हुन् । नेपाली दर्शकलाई नेपाली सिनेमाबाट नै मनोरञ्जन दिने हाम्रो लक्ष्य हो’, भुवनले भनेका छन् ।
सुपर काजल फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमा क्याप्टेनलाई दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् । अभिनेता भुवन केसीको लगानीमा निर्माण भएको क्याप्टेनकी कार्यकारी निर्माता जिया केसी हुन् ।चलचित्रमा अनमोल केसी, उपासना सिंह ठकुरी र प्रियंका एमभीका अलावा प्रशान्त ताम्राकार, सुनिल थापा, सरोज खनाल, विल्सन विक्रम राई, सूर्यमाला खनाल, राजाराम पौडेल, बुद्धि तामाङ, अमित श्रेष्ठलगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
सो चलचित्रमा सामिप्यराज तिमिल्सेनाको कथा, निर्देशक दीवाकर भट्टराईको पटकथा तथा संवाद, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, नवराज उप्रेतीको छायांकन, सुदिप बरालको डीओपी, दीर्घराज खड्काको सम्पादनमा रहेको छ ।चलचित्रमा ‘द ब्रेकअप’मा आशिरमान देशराज जोशी, शिल्पा मास्के, रेमनदास श्रेष्ठ, सरोज खनाल, नव–कलाकार इच्छा कार्कीलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । बीसी मोसन पिक्चर्स र ह्याप्पी प्लानेट फिल्म्सको प्रस्तुति रहेको चलचित्रमा कथा, पटकथा तथा निर्देशन हेमराज बिसीको रहेको छ ।चलचित्रलाई रुपक थापा, दीपक खतिवडा, रेणु राणा र निर्देशक हेम राज बिसीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा नरेन मैनालीको डीओपी र सुरेन पौडेलको सम्पादन रहेको छ ।
आँचल र आकाशको अभिनित फिल्म ‘ब्ल्याक’ युट्युबमा सार्वजनिक (भिडियो)